Indlela ukungenisa izithombe siqu namavidiyo kusuka iPhone, iPad, noma iPod Touch ku-Mac besebenzisa iPhoto
Ungakwazi thwebula izithombe namavidiyo besebenzisa ikhamera eyakhelwe-ku on iPhone, iPad, and iPod touch, noma wena ugcine izithombe eziningi ezinhle izicelo. Okokufundisa sizobonisa indlela ukungenisa izithombe kusuka kudivayisi yakho iOS besebenzisa iPhoto(Uma ungenayo i-iPhoto, chofoza lapha ukuze uthole iOS Transfer).
1. Xhuma idivayisi yakho kukhompyutha yakho. iPhoto kumele uvule i ngokuzenzakalelayo, izithombe idivayisi yakho kanye namavidiyo ziyoba abalulwe window yokungenisa.
Inothi: Uma-iPhoto akusho ngokuzenzakalelayo ukuvula, you may wish to open it manually.
2. Chofoza Import Konke ukungenisa zonke izithombe zakho ku-computer. Uma ufuna ukudlulisa kuphela ingxenye iqoqo lakho, mane ukhethe izithombe namavidiyo ongathanda ukungenisa, ke uchofoze inkinobho "Ngenisa ezikhethiwe".
3. Pho sekufika izithombe ulingisa esiphelele, ungabona umbuzo sibuza ukuthi ngabe ungathanda ukususa izithombe original kusuka Camera yakho Roll.
Posted on Okthoba 6, 2013 May 9, 2015 Umbhali WillIzigaba Amathiphu & NamaqhingaAmathegi ukungenisa izithombe kusuka iPhone kuya iPhoto, ukungenisa izithombe Mac, iPhone kuya Mac, ukudlulisela izithombe kusuka iPhone kuya mac, ukudlulisela amavidiyo iPhone ekhompyutheni
Langaphambilini post Previous: Indlela ukudlulisa izithombe kusuka iPhone kwikhompyutha
Next post Next: Indlela ukushintsha phakathi Open Apps ku-iOS 7